Igumbi eliphezulu elinomgangatho ophezulu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKanyarat
Injongo yethu kukubonelela ngendawo yokuphumla kunye nekhululekile kwizibini ezihambahambayo okanye iintsapho ezincinci, nokuba udlula nje okanye uhlala ixesha elide. Sizibophelele ekuziseni amava awodwa nanobubele kwimbali yaseSukhothai
Sinikezela ngendlu enenkonzo efana ne-penthouse enika iimbono ezintle zentaba ye-Khao Luang, enemvakalelo ephangaleleyo kunye neyangoku.
Indlu iza nefenitshala epheleleyo. Amagumbi okulala amabini amakhulu aneebhedi ezilingana nenkosi, indawo yokugcina iimpahla kunye nendawo yokunxiba. Igumbi ngalinye linebalcony yalo yabucala efanelekileyo yokuphumla.
Indawo yethu yokutyela inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinemicrowave, ifriji, iketile, itoaster kunye nesidlo sangokuhlwa.
I-Apartment ine-air-conditioning ngokupheleleyo kwaye ine-Wi-Fi enesantya esiphezulu kuyo yonke indawo. Indawo yokuzonwabisa inendawo yokuphumla enezihlalo ezi-3 kunye ne-55inch smart TV, enikezela ngamajelo asekuhlaleni kunye neNetflix. Idesika encinci yeofisi ikwabonelelwa abo bafuna ukufumana nawuphi na umsebenzi okanye izabelo zokufunda.
Ishawari eyahlukileyo kunye namagumbi angasese avumela ubumfihlo obungcono, ucoceko kunye nokufikeleleka lula, ilungele iindwendwe ezininzi.
Sime kwindlela enkulu ye-Sukhothai CBD, sijikelezwe ziindawo zokutyela ezinkulu kunye neekhefi. Ukuhamba nje ngemizuzu eli-10 ukuya kwi-7-11, imivalo, kunye nobomi basebusuku basekhaya kunye neemarike zangoMgqibelo ebusuku.
Kukho indawo yokuhlamba iimpahla ozisebenzelayo umgama nje oyimizuzu emi-5, kunye neKliniki yezoNyango ngaphakathi kwekhompleksi.
Umbuki zindwendwe ngu- Kanyarat
Ndihlala nomyeni wam kunye nenkwenkwe eneenyanga ezi-8 kumgangatho we-2 wesakhiwo. Umsebenzi wethu ulapha ecaleni kwendlu, oko kuthetha ukuba siyafumaneka ngokuthanda kwakho! Njengomntu wasekhaya ubomi bonke ndingancedisa ngayo nantoni na ukusuka ekurenteni iibhayisekile ukuya ekufumaneni iphuli yasekhaya okanye i-spa.
Ndihlala nomyeni wam kunye nenkwenkwe eneenyanga ezi-8 kumgangatho we-2 wesakhiwo. Umsebenzi wethu ulapha ecaleni kwendlu, oko kuthetha ukuba siyafumaneka ngokuthanda kwakho! Njeng…